Dainik Headlines - Page 30 of 490 - Nepali Khabar from Nepal
कपाल फुल्ने समस्या छ ? अब घरमै गर्नुहोस् सजिलो उपचार
January 7, 2019	Healthy Life 0
उमेर पुगेर कपाल फुल्नु समान्य विषय होला, तर उमेर नै नपुगि कपाल फुल्नु भनेको समस्याको विषय हुन्छ । कपाल मानिसको व्यक्तित्वसँग जोडिएको विषय हो, यदि तपाईको उमेर नपुगेरै युवा अवस्थामै कपाल फुलेको वा सेतो भएको छ भने त्यसलाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ । आउनुहोस् आज हामी तपाईलाई कपाल फुल्ने समस्या …
January 7, 2019	Dharma 0
यदि तपाई हरेक दिन घर या मन्दिरमा पूजा या प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने तपाईले केही नियम पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम भए धर्म हुन्छ र धर्म भए जीवन हुन्छ । अतः नियमानुसार नै कुनै पनि कार्य गर्नुभयो भने उचित हुन्छ । त्यसोभए पूजाभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने कार्य के हो जो …
हरेक मानिस आफ्नो सौन्दर्यको सवालमा निक्कै सचेत हुने गर्छन। अनुहार सफल बनाउँन अनेकन उपाय अपनाउँने गर्दछन्। बिशेषत् युवतीहरु आफ्नो अनुहारको हेरचाहका लागि अनेकन क्रीम प्रयोग गरी रहेका हुन्छन् तर कतिपय अवस्थामा ती क्रीम नै अनुहारका लागि हानीकारक हुन्छन्। तपाई आफ्नो मुहारका दागहरु हटाई गारोपनाका लागि दैनिक यस्तो उपाय अपनाउँनुहोस्। सबैभन्दा …
सबैभन्दा धेरै गरिब हुने गर्छन् यी दुई राशीहरु ! यस्ता छन् गरिबी हटाउन अपनाउनै पर्ने उपाय !
एजेन्सी- हरेक व्यक्तिले आर्थिक सम्पन्न र सुखसहेल जिन्दगी बिताउने चाहना राख्ने गर्छन्। केही व्यक्तिहरुले सजिलै आफूले सोचे अनुसारको जीवन निर्वाह गर्न सक्ने भएपनि केही मान्छेका लागि यो सपना मात्र बन्न पनि सक्छ। यसरी जीवनमा सफलता पाउनका लागि धेरै व्यक्तिहरुले विभिन्न तरिका अपनाउने गर्छन्। यसरी कसैले राम्रो अम्दामी गर्नुका साथै आफु …
नेपाली सेनाबाट कठिन जङ्गल युद्धकला सिक्ने सबै भन्दा बढी चीन, अमेरिका र भारत
विशेषगरी सुरक्षा अङ्गको प्रतिविद्रोह तथा प्रतिआतङ्कवाद क्षमता अभिवृद्धि गर्न जङ्गल युद्धकला तालीम अति महत्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ । नेपाली सेनाद्वारा यहाँ सञ्चालित प्रतिविद्रोह तथा जङ्गल ‘वारफेयर’ शिक्षालय अहिले विदेशी सैनिकलाई समेत जङ्गल युद्धकला सिक्ने उत्कृष्ट तालीम केन्द्र बन्न पुगेको छ । पछिल्लो वर्षयता विशेषगरी अमेरिका, चीन तथा भारतका सैनिक अधिकृतका लागि …
काठमाडौं । के तपाईको मुखमा साना-साना बिबिरा, फोका-फोकी आएर निकै सताएको छ ? मुखभित्र, जिब्रो, गिजा, ओठ लगायत मुखको कुना-कानी र कहिलेकाहीँ गालाको छेउसम्म पनि घाउ भएकाे छ ? यस्ता घाउ खटिराकाे समस्या बढेर जटिल समस्या पनि अाउन सक्छ । घाऊ ठूलो र गहिरो भएमा खान बोल्नै नहुने किसिमको पनि …
कुरिलाे खानुहोस पिशाब पाेल्ने,पेटकाे ट्युमर,घाँटीमा भएकाे संक्रमणबाट बच्नुहोस
कुरिलाे खानुहोस पिशाब पाेल्ने,पेटकाे ट्युमर,घाँटीमा भएकाे संक्रमणबाट बच्नुहोस!!!अंग्रेजीमा Asparagus भनिने Asparagus racemosus वानस्पतिक नाम भएकाे कुरिलाेलाइ संस्कृतमा शतावरी भनिन्छ । नेपालकाे मैदानी जंगल देखि लिएर चार हजार फिट देखी नाै हजार फिटकाे उच्च हिमाली भूभागसम्ममा पाइने कुरिलाेलाइ अायुर्वेदले अाैषधिकी रानी भनेकाे छ काँडा भएका् र नभएकाे गरि दुइ प्रकारकाे हुने …
काठमाडौं — भगवान् परशुरामबाट धनुर्विद्या प्राप्त गरेपछि कर्णले बालुवाको कणलाई पनि निशाना बनाउन सक्ने सामर्थ्य प्राप्त गरेका थिए । उनी डिसाको कोणार्कमा सूर्य भगवानको तपस्या गरेर कैयौं दिनसम्म ध्यानमा बसे । केही हप्ता साधनामा बसेपछि उनको भोक एकदमै बढ्यो । उनले बल्लबल्ल काँक्रो भेटे र खाए तर त्यसले त झन् …
१२ वर्षमै आमा बनेकी गंगामाया छोरीलाई हेर्छिन्। मुसार्छिन्। आफैं लजाउँछिन्। मुस्काउँछिन्।
नातिनी जन्माएकी बाह्र वर्षीया छोरीलाई तंग्रिनका लागि हर्लिक्स घोलेर खुवाउँदै थिइन्, राममाया। तीन दिन अघि छोरी गंगामायाले नातिनी जन्माइन्। बज्यै बनेकोमा खुशी छन्। कलिलै उमेरमा सन्तान जन्माएकी छोरीको हेरचाहमा उनी जुटेकी छन्।मकवानपुर, रा क्सिराङ गाउँपालिका–७ मा घर छ उनको। ‘काठमाडैांबाट पन्ध्र सय रुपैयाँ बस भाडा लाग्छ’, नातिनी खेलाउँदै राममायाले भनिन, …
एजेन्सी । तरकारीका रुपमा प्रयोग गरिने च्याउ ‘ढुसी’ प्रजातिभित्र पर्छ । च्याउ जस्तो रङहीन तरकारीले पनि हाम्रो खानामा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन र खनिज पदार्थ प्रदान गर्छ । खानपानले विभिन्न रोगहरु लाग्न नदिन र निराकरणमा मद्दत गर्ने त सबैलाई थाहै छ। त्यस्तै, च्याउको सेवनले पनि विभिन्न रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । …